Alexa App for PC - Ahoana no fampiasana amin'ny Windows 10? - Ahoana No
Ny fahamoran'ny mpanampy nomerika marani-tsaina dia iray amin'ny karazany iray. Misy safidy tsy tambo isaina ao amin'ity sokajy ity, toa an'i Siri, Cortana, Google Assistant, ary Alexa. Na izany aza, ny Alexa's Amazon dia tsy isalasalana fa nanangana ny akany ho mpanampy am-peo eran-tany.
Noho izany, Amazon dia nanambola tamin'ny fitondrana anao ny Alexa App for PC. Marina izany! Ny fampiharana Alexa tianao indrindra dia azo alaina amin'ny PC hanampiana endri-javatra mpanampy maranitra ao amin'ny solosainao.
Inona no atolotry ny Alexa App amin'ny PC?
Izy io dia miasa toy ny laharana Echo Dot an'ny Amazon. Raha atao teny hafa, Alexa mamela anao hanao na inona na inona ataon'ny mpanampy, fa ho an'ny PC. Io dia ahafahanao mijery Internet, mametraka fanairana na fampahatsiahivana, miantsena an-tserasera sy maro hafa. Alexa dia afaka manoratra ny baikonao amin'ny fomba mahomby ary mitondra anao hanana fahafaham-po mitovy amin'izany.
Ny Alexa amin'ny PC dia miasa mitovy amin'ny fanapahan-kevitra tohanan'ny Alexa. Noho izany, azonao atao ny mifehy ny rafitra an-trano feno fahendrena, raha ilaina izany. Ny fampiharana sasany toa ny Video, Spotify, ary Pandora dia tsy azon'ny Alexa For PC amin'izao fotoana izao. Na izany aza, ny orinasa dia miasa amin'ny fanavaozana mba hanomezana anao ireo fialan-tsasatra ireo.
Ny fampiharana Alexa ho an'ny PC dia manana fahaleovan-tena mitovy amin'ny baiko. Noho izany, azonao atao ny mampiasa baiko isan-karazany toy ny fanamarinana ny toetr'andro, ny fanaovana vazivazy, sy ny maro hafa. Manana fifehezana feno ny PC ianao toy ny fitaovana tsy misy tanana. Ny fampitahana sy ny fahatsoran'ny Alexa dia mahavariana tokoa.
Na izany aza, misy fetra voafetra ny azon'ny Alexa atao amin'ny Windows PC. Tsy manohana fanaraha-maso feno ny Windows 10. Araka izany, raha te-hanomboka asa manokana an'ny PC ianao dia mila manao izany amin'ny tanana. Fepetra lehibe io. Angamba tadiavin'i Microsoft ny Cortana ho azy ireo. Tsy mazava ny antony. Noho izany, na dia manam-pahatsorana amin'ny Alexa aza ianao, dia voafetra tsikelikely ihany.
Inona no ilainao amin'ny fampiasana Alexa App amin'ny PC?
Voalohany, mila Windows 10 sy PC misy mikrô ianao. Ny mikraoba voaorina dia hiasa tsara indrindra, saingy tsy ilaina izany. Rehefa dinihina tokoa, ianao dia hampiasa baiko am-peo ho an'ny traikefa tsy misy tanana an'ny Alexa. Manaraka izany, mila fifandraisana Internet miasa ianao mba hifandraisan'i Alexa. Raha tsy misy fifandraisana Internet dia tsy mandeha i Alexa.
Raha mandeha amin'ny laoniny, Alexa dia tsy misy amin'ny solosaina finday iOS na Mac. Araka izany, raha tsy manana Windows 10 ianao dia tsy afaka mihazakazaka Alexa amin'ny PC-nao. Mac dia tsy manana fanohanana an'i Alexa na ahoana na ahoana. Ka raha mijery Alexa ho an'ny Mac ianao dia mbola tsy misy safidy azo atao.
Mila ID an'ny Amazon ihany koa ianao hiditra ary hiasa amin'ny Alexa. Raha tsy misy ny ID Amazon, dia tsy handeha ny Alexa. Azonao atao ny misoratra anarana na mampiasa ny ID efa anananao. Raha tadiavinao hifamatotra ny rafitry ny tranon-tsainao dia tsara kokoa ny mampiasa ilay ID ampiasanao amin'ny fitaovana hafa.
Alexa App ho an'ny PC - Ampidino & ampidino ny dingana
Mba hametrahana Alexa, voalohany, tsy maintsy apetrakao. Tsidiho ny Microsoft Store ofisialy, aza mampiasa tranokala hafa. Tadidio fa mila Windows 10 farafaharatsiny ianao ary mikraoba voaorina hampiasa Alexa.
Azonao atao ny mitady Alexa amin'ny alàlan'ny bara fikarohana ao amin'ny Microsoft Store ary avy eo ampidinoo avy eo. Raha vao sintonina dia azonao atao ny mametraka Alexa amin'ny fanarahana ny dingana mahazatra amin'ny fisintomana ireo rindranasa hafa amin'ny PC.
Mandrosoa ny fampiharana aorian'ny fametrahana azy. Ankehitriny, mila ID Amazon ianao ary hametraka ireo mari-pahaizana. Raha vantany vao vita ny teny miafinao sy ny fidirana, dia hanomboka amin'ny Alexa.
Vakio ny teny sy ny fepetra hahafahanao mahatakatra ny zava-kendrenao.
Ny app dia hangataka anao hamela mic sy alalana hafa, avelao izy ireo arakaraka ny takinao.
Mandritra ny configurations dia hangataka anao amin'ny mode hands-free na push-to-talk ianao. Ny tanana tsy misy tanana dia hitazona ny mic hatrany hatrany, ary afaka mampiasa baiko toy ny 'Hey Alexa' ianao hanombohana ilay mpanampy ny feo. Ny push to talk dia mitaky anao hampiatoana an'i Alexa amin'ny alàlan'ny fanosehana ny baikon'ny PC sy ny fampiasana azy.
Izay ihany no ilain'ny fametrahana anao, fametrahana ary hampiatoana an'i Alexa. Na izany aza, mety tsy maintsy ataonao ao ambadika ny fampiharana Alexa. Raha nisafidy ny push-to-talk ianao dia afaka manova toerana tsy misy tanana foana amin'izay tianao.
1Q. Azonao atao ve ny miantso antso amin'ny Alexa App ho an'ny PC?
taona:Tsy afaka manao antso amin'ny Alexa for PC ianao. Na izany aza, azonao atao ny mividy fitaovana Echo hahafahanao manao antso. Izay ihany no safidy azo atao. Azonao atao koa ny mampifandray ireo mpikabary Echo amin'ny PC-nao mba hahazoana fidirana fanampiny. Amin'izao fotoana izao, tsy misy safidy hanaovana antso an-tsary na feo. Misy fetrany manokana ny azon'ny Alexa atao amin'ny PC-nao.
2Q. Azonao atao ve ny manamboatra ny rafitra ho an'ny PC?
taona:Raha manana rafitra mihidy tanteraka ianao dia tsy ho afaka hamerina azy io intsony i Alexa. Izany dia mitovy amin'ny famonoana ny herin'ny fitaovana rehetra. Noho izany, tsy hihaino anao ny Alexa ao amin'ilay fitaovana. Na izany aza, raha ny PC-nao dia eo amin'ny mode-torimaso miaraka amina famatsian-jiro tsy tapaka, azonao atao ny mampiasa Alexa hanaitra ny PC-nao sy hampiasana azy. Azonao atao mihitsy aza ny manome ny teny miafina hahafahany manoratra sy mampihetsika azy amin'ny feonao.
3Q. Maninona no mampiasa Alexa Over Cortana?
taona:Ny olona sasany dia tia ny fahamoran'ny Alexa sy ny fifandraisany manerana ny rafitry ny trano an-trano. Raha manana fitaovana an-trano marani-tsaina toa ny mpankafy, jiro ary Echo ianao dia mety te hampifandray ny PC-nao amin'ity tambajotra ity koa. Izany no ahafahan'ny Alexa manaporofo fa fananana sarobidy kokoa noho i Cortana. Mazava ho azy, mbola mianatra i Cortana, ary voaporofo fa mpanampy amin'ny feo mahay i Alexa. Ny olona sasany dia tia an'i Alexa mihoatra ny mpanampy hafa.
Izay ihany no ilainao hametrahana ny Alexa App For PC. Tsy isalasalana fa mety izany fa tsy fampiharana mahay loatra. Na hisy Alexa ho an'ny kinova taloha na Mac dia toa tsy afaka ifanakalozana hevitra akory. Antenaina fa ity torolàlana ity dia manampy anao hahazo izay tianao rehetra.
Aza adino, Alexa for PC dia mpanampy marani-tsaina izay hanao asa kely. Na izany aza, mbola mila miasa tanana ihany ianao amin'ny lahasan'ny PC. Na i Cortana aza tsy afaka manohana any! Izay ihany!
pokemon dia misafidy anao aho kissanime
tranokala mivantana maimaim-poana 100 maimaim-poana
aiza no ahafahako mividy boaty tv android
ahoana no anaovako akanjo amin'ny roblox
misoratra anarana ho an'ny fitsarana ambony maimaim-poana
youtube ho mp3 marobe indray mandeha